Nhau - Musiyano uripo pakati peSideboard neBuffet
Musiyano uripo pakati peSideboard neBuffet
Sideboards anogona kuuya mune akateedzana masitayera uye ane akawanda akasiyana maficha. Iyo yemazuva ano-sideboard inowanzo kuve yakapfava uye inogona kuve nemakumbo akareba zvishoma pane echinyakare sideboard.
Ikaiswa mukamuri yekutandarira, mativi emabhodhi anogona kushanda senzvimbo yekuvaraidza. Nekuda kwenzvimbo yavo yakakura yekuchengetera uye kuti materevhizheni mazhinji anokwanisa kukodzera kumusoro, mativi emabhodhi anoita sarudzo yakanaka yenzvimbo yekuvaraidza.
Kana yaiswa mufoyer, padivi inogona kushandiswa kugamuchira vaenzi nenzvimbo inoshumira kuchengetedza makiyi, tsamba, uye zvekushongedza zvinhu.
Buffet, yakafanana nebhodhi repadivi, chidimbu chemidziyo ine yakareba, yakaderera nzvimbo yekuchengetera. Mabuffets anowanzo kuve iwo akakosha fenicha pakati pezviviri. Mabuffets anowanzo kuve nemakabati akakura uye makumbo mapfupi anoita kuti igare pasi pasi.
Pakupedzisira, buffet nebhodhi repadivi ndiwo mazita anochinjika echinhu chimwe chete chemidziyo. Zita rinongo shanduka zvichibva nekuti panowanikwa fanicha. Rutivi rwemberi rwakaiswa muimba yekudyira inonzi buffet, asi kana yaendeswa kuimba yekutandarira, inonzi sebhodhi.
Mabuffets anoshanda sechinhu chakakura chemidziyo yekuchengetera yako yekudyira imba. Sirivheri, mahwendefa ekushandira uye machira anowanzo chengetwa mumabuffets. Mahwendefa avo akaderera anoita nzvimbo yepamusoro yekushandira chikafu, kofi, kana tii kana uine vaenzi pamusoro.
Post nguva: Dec-19-2020